News Archive - DESIGN FORM TANANA → Architecture Small Urban ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Ny fanariana fako dia ampahany amin'ny fanodinam-bidy monisipaly dia manampy amin'ny fahadiovana ny toerana ho an'ny daholobe, ny fanesorana ny olan'ny pesta ary manome tombontsoa azo antoka amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny famafana ny fako amin'ny fako. Ny tanàna dia mety hampihena ny vidin'ny tipping ary ...
Ny trano fitobiana bus tsara dia singa manan-danja amin'ny rafitra fitaterana fitateram-bahoaka an-tanàn-dehibe. Ny mahatonga azy tsara dia ireo toetra izay mahatonga azy io ho ambany fikojakojana sy manohitra ny fandrika. Ankoatr'izay, manome fahitana sy fidirana mora amin'ny fiara fitateram-bahoaka, ...
Ny birao fampahalalam-baovao dia niaraka tamin'ny olombelona hatramin'ny vao maraina be
Azo lazaina fa ny fahaterahan'ireo famantarana sy takelaka dia toa ohatry ny fisian'ny olombelona eto ambonin'ny planeta. Karazan-tsindrim-pampianarana maro samihafa dia efa nampiasaina hatramin'ny niandohan'izao tontolo izao, ny tsirairay amin'izy ireo dia natao tamim-pahombiazana ho an'ny tanjona fampahalalana. Tamin'ny nahitana varahina sy vy dia nanomboka nampiasa ireo fitaovana ireo ny olona ...
4 Martsa 2020
Familiana bisikileta - karazana ary tombony
Ny bisikileta dia tokony hotehirizina amin'ny toe-javatra mety, ka ilaina ny talantalana mety. Izy io dia vokatra midadasika ka ny tsirairay dia hahita valizy bisikileta antonony ho an'ny tenany, izay mety ho hafa tanteraka amin'ireo izay hita isaky ny dingana amin'ny habakabaka. Jereo ny katalaogin'ny vokatra ...
1 Martsa 2020
IF Design Award 2020 ho an'ny marika Metalco!
Faly izahay manambara fa ny tetik'asa Smart BHLS Transoceânica Corridor nataon'i Guto Indio da Costa dia nahazo ny mari-pahaizana IF Design Award 2020 tamin'ny sokajy Design Excelence ho an'ny fialofana bisy iraisana, izay ao anatin'ny tetik'asa SMART CITY. Jereo ny katalaogin'ny vokatra an-tserasera >> na ...
21 Febroary 2020
Ny mpanao maritrano dia miara-miasa amin'ny drafitra sy ny famolavolana tranobe na ny firafitra. Ny mpikaroka dia afaka manadihady ireo fotokevitra na hevitra ao amin'ny mpanjifany ary manangana tetikasa fananganana miavaka mifototra amin'izany. Ny asan'ny maritrano dia mety miovaova: ny sasany manokana amin'ny famolavolana trano ...
Fandrafetana ny tanàna - inona marina no tena izy?
Androany, ny drafitra an-tanandehibe dia iray amin'ireo siansa ilaina indrindra raha mandinika ny ampahan'ny ampahany amin'ny mponina eto an-tany amin'izao fotoana izao sy manodidina ny tanàn-dehibe isika. Tamin'ny 1800, dia ny 2 isan-jaton'ny mponina manerantany ihany no nonina tao an-tanàna. Tamin'ny taona 1950 dia tafakatra hatramin'ny 30 isan-jato izany isa izany. Ary izao ...
Lalàna momba ny fananganana
Ny lalàna momba ny fananganana dia asa mifehy sy mamaritra ny asa atao amin'ny famolavolana, fananganana, handrava ary fanaraha-maso ny tranobe. Ny ambaratonga rehetra amin'ny fananganana tranobe, manomboka amin'ny famolavolana hatramin'ny farany dia mitaky ny fankatoavana ny lalàna momba ny fananganana. Lalàna momba ny fananganana sy ny fananganana trano marim-pototra.
Ny fandaharana ny saha dia tokony atao amim-pitandremana tanteraka. Na izany aza, na dia tsy manana zaridaina lehibe eo am-pelatanany aza ny mpampiasa, fa zaridaina kely ihany, na misy fantsom-baravarana na terasaha aza dia afaka mamorona rantsana maitso ihany koa. Ny fototr'izany dia ho vilany saha, izay ...
Lahatsoratra vita amin'ny fefy
Ny fefy dia ho tsara sy matanjaka toy ny tsato-kazo manohana azy. Na inona na inona karazan-materialy hamboarina izy ireo, dia ilaina ny mahafantatra ny tombony, ny fatiantoka ary ny fampiasana tsangambato fefy vita amin'ny hazo, vy, tsato-kazo vita amin'ny beton ary galvanis ...
Ireo fako an-dàlana maoderina dia singa amin'ny singa maritrano amin'ny tanàn-dehibe
Ireo fitoeram-pako, hita eny amoron-dalana, eo amin'ny fijanonana, any amin'ny valan-javaboary, any amin'ny kianja filalaovana, eo amin'ny boaty fasika, eny amin'ny zaridaina sy ny kianja amin'ny tanàna, indraindray dia antsoina hoe fitoeram-pako eny an-dalambe, fitoeram-bato, fitoeran-tanàna na fako ao an-tanàna Jereo ny katalaogin'ny vokatra an-tserasera ...
3 Febroary 2020
Ny dabilio park dia singa iray tena ilaina amin'ny fanaka an-dalambe. Raha ny fahitana ny fiasan'ny fampiasana dia ampiasaina amin'ny fipetrahana izy ireo, saingy raha jerena ny drafitry ny habaka dia fanaka an-tanàn-dehibe izy ireo. Ny zaridaina, kianja, zaridaina, arabe ary fijanonana ao an-tanàna dia misy dabilio. Jereo ny katalaog ...
28 Janoary 2020
Ny maritrano kely tanàna
Ny maritrano kely dia vondrona trano kely izay misy fiantraikany lehibe amin'ny fiheveran'ny mpampiasa azy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo singa voafantina voafaritra tsara ny maritrano izay entin'ilay faritra mandrindra ny toetra, ny fanehoana ary indrindra ny rehetra, lasa ...
Fanontaniana momba ny vidiny
Voalohany sy anarana